အဆောက်အဦးအပြင် Upholstery အထည်အလိပ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM- fabricbackpacks.com
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အဆောက်အဦးအပြင် Upholstery အထည်အလိပ်
ကျနော်တို့ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုဆက်ကပ် အဆောက်အဦးအပြင် Upholstery အထည်အလိပ် အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်နှင့်ငြိမ်ဝပ်နှင့်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့၏အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောနှင့်အကောင်းဆုံးသောအရည်အသွေးပြည့်သောပစ္စည်းများ အသုံးပြု. ထိုထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်။ ထိုထုတ်ကုန် clients များစျေးနှုန်းသက်သာဈေးနှုန်းများမှာကျွန်တော်တို့ဆီကပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ်။
OUF 6-1 : polyester ထည်
OUF 6-2 : ပတ်ချာလည်အထည်အလိပ်
1. အထူးအအမည်: Brush ရရှိနိုင်, anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး, တာရှည်ခံရေတွန်းလှန်, UV-
2. အရောငျ: Pantone အရောင်လမ်းညွှန်ထောက်ပံ့နမူနာသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အရောင်အပေါင်းတို့
ထုတ်လုပ်ဖို့နမူနာကိုလိုက်နာဖို့ 3. တောင်းခံခြင်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
YungYaw Fabrictech ကော်ပိုရေးရှင်းထိုင်ဝမ်အားဖြင့်ထုတ်ဝေသည် 4.
OUF 6-3 : Dobby အထည်အလိပ်
ပုံစံများ & ဒီဇိုင်းများ၏ 1. အမျိုးမျိုး, anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး, C6 & C8 ရေတွန်းလှန်, ခရမ်းလွန်-ressistant ။
2. အရောငျ: ထူးထူးအထွေထွေရှိငြားအရောင်များကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ် customized နိုင်ပါသည်။
ပုံစံအရောင်, စမ်းသပ်ခြင်းစံ ... စသည်တို့အပေါ်တစ်ဦးဆှေးနှေးမှုရှိသည်ဖို့ 3. မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ။
OUF 6-4 : နယူးဂျာစီပြည်နယ်အထည်အလိပ်
ရေစိုခံ, ဆောင်မှုဒီဇိုင်း, anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး, တာရှည်ခံခရမ်းလွန်-ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စိုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အတူ 1. Triple-layer ကိုသုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
2. အရောငျ: အားလုံးကြိုဆိုပါတယ်နေကြတယ်နမူနာ, ဖောက်သည်နမူနာသို့မဟုတ် Pantone အရောင်တည်။
4. ဇာစ်မြစ်၏နေရာအရပ်: ထိုင်ဝမ်
ထုတ်ကုန်။ ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာ core ကိုတန်ဖိုးများကိုတည်ငြိမ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှအာရုံစူးစိုက်ယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံတန်ဖိုးများကိုငါတို့သညျကိုဖောက်သည်တိုင်းတာအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆောင်ကြဉ်းငါတို့၏မစ်ရှင်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။